China Impompo yokuhambisa amanzi amdaka e-China -22 11-22Kw） abavelisi kunye nabathengisi | KAIQUAN
Ukuhamba: 40-1150m3 / h
Ukuya kuthi ga kwi-62m: Ukuya kuthi ga kwi-62m
I-WQ (11-22kw) Uthotho lwePompo yokuGutyulwa kwelindle
I-WQ (11-22kW) IziBonelelo eziLungileyo zePompo
Itekhnoloji ye-1.Innovative enoyilo olungaphezulu kokungqinisisa okungaphezulu kokumpompoza kwelindle
Uyilo lokutywina lwempompo yamanzi eyi-2 yokuqinisekisa ukusebenza kwexesha elide kwimpompo.
Khetha uphawu lweBurgmann lophawu lomatshini, izinto zempompo ezisecaleni yiWC Vs WC zinokwenza ukuba ubomi buqhubeke ixesha elide.
Itekhnoloji ye-3 yoomatshini itekhnoloji yokuzicoca.
Ukutywinwa kwamatywina amabini kufakwe kuthotho kunye neentsika ezikhethekileyo zomoya okanye izithuba ezincinci zamkelwa kwisigqubuthelo sempompo ukunqanda ukudideka kwemixokelelwano yomhlaba ejikeleze amatywina oomatshini kwaye ngaloo ndlela kuqinisekiswe ukusebenza kwabo okuzinzileyo
Ulwandiso shaft elifutshane.
Ulwandiso olufutshane lweshafti lubonisa ukomelela okuphuculweyo kunye nokumelana okuphukileyo nxamnye nokwahlukana
Ngoyilo lweebhereig zomsebenzi onzima, Ubomi obuncinci benkonzo yi-100,000hr yeebheringi
Uyilo oluthembekileyo lweemoto ezinokuntywila
Imoto ikwinqanaba lokugquma H (elisebenza nge-180ºC) ekuphuculeni ukuthembeka kunye nokumelana nokujija kwamaqondo obushushu aphezulu.
Uyilo impompo 7.Universal
Imowudi yofakelo yahlukile, kubandakanya uhlobo lokudibanisa oluzenzekelayo. Impompo kunye nombhobho wokudibanisa uqhagamshele kwisihlalo sombhobho wokuphuma wesixhobo sokudibanisa. Akukho zinto zokubopha ziqhelekileyo zisetyenziswayo.
Egqithileyo Impompo yokuhambisa amanzi amdaka (0.75-7.5Kw)
Okulandelayo: Impompo yogutyulo lwelindle elingena emanzini> 30Kw）
Umzobo we-11kW-22kW we-Pump yoLwakhiwo olungeleleneyo
I-WQ (11-22kW) Umzobo wempompo ye-Spectrum eDibeneyo kunye nenkcazo